Uncategorized Archives : Page2of2: Snacks Mandalay
Snacks Mandalay company limited
By Three Stars | April 23, 2018 | 0
Vision and Value proposition Value addition of agricultural raw materials, responsibly sourced from smallholders, with our modified Thai processing technology, leading to: Manufacturing of safe and quality foods for domestic and international market as well as integrating smallholders into commercial supply chains. Eliminating aflatoxin from chili value chain, raising awareness about risks of improper drying…
*** ငရုတ်သီးက ပေးနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ ***
By Three Stars | March 31, 2018 | 0
*** ငရုတ်သီးက ပေးနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ *** ငရုတ်သီးတွေအများကြီးစားရင် ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ ရတတ်တယ်ဆိုတာ လူသိများပေမယ့် ငရုတ်သီးစားခြင်းအားဖြင့် ရနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကိုတော့ သိပ်ပြီးသတိမထားမိတတ်ကြပါဘူး။ အဲဒီတော့ ငရုတ်သီးစားတဲ့သူတွေ ရနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ပုံတစ်ပုံချင်းစီ ထောက်ကြည့်ကြပါနော်… Three Stars (ငရုပ်၊ သီးနှံခြောက်နှင့် အမှုန့်အမျိုးမျိုး) *** Netherlands နိုင်ငံအသိအမှတ်ပြု ISO 22000, GMP, HACCP, EU & USDA Organic Certificate လက်မှတ်ရ စားသောက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် *** #ThreeStars #ChilliPowder #TumericPowder #Certified #OrganicProducts #HACCP #GMP #ISO22000 #ProductOfMyanmar Ref: http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=29 https://www.healthline.com/nutrition/foods/chili-peppers…
အထက်မြန်မာပြည် စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်း မှ ရွေးချယ်ပေးအပ်သော ပထမဆု 🥇ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
🇲🇲ပြည်တွင်းမှ ထုတ်ကုန်များကိုသာ အသုံးပြုထားခြင်း။ 🇲🇲မြန်မာနိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ခြင်း။ 📰အစားအသောက်ဘေးအန္တရယ် ကင်းရှင်းကြောင်း အထောက်အထားများခိုင်လုံစွာ ရှိခြင်း။ 🌏နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ Certificate များဖြင့် export လုပ်နိုင်ခြင်း။ 💯ထုတ်လုပ်မှု ထုပ်ပိုးမှုများသည်လည်း ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း။ ♻️သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု မရှိခြင်း။ 🏤စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားခြင်း။ စသည် စသည် အချက်များကြောင့် ပထမဆု 🥇🥇🥇ကို ထိုက်တန်စွာဖြင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။ အကဲဖြတ် အမှတ်ပေးခဲ့ကြသော လူကြီးမင်းများ နိုင်ငံတော်အဆင့် တာဝန်ရှိ လူကြီးမင်းများ စားသုံးသူများနှငိ့တကွ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများကို #ThreeStars မှ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
By Snacks Mandalay | March 31, 2018 | 0
*** စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဆိုးဆေးအန္တရာယ် *** ** စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေမှာ ဆိုးဆေးတွေကို ဘာလို့သုံးကြတာလဲ ** တချို့စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာ သဘာဝအတိုင်းဆိုရင် အရောင်အဆင်းသိပ်လှလေ့ မရှိပါဘူး။ အဲဒီတော့ စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းကို အရောင်အဆင်းလှလှပပဖြစ်ပြီး စားသုံးသူတွေအတွက် ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိစေဖို့ အစားအစာတွေမှာ ဆိုးဆေးတွေကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ အစားအစာတွေမှာ ဆိုးဆေးတွေအသုံးပြုတာကလည်း ခုခေတ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ BC ၂၅၀၀ လောက်ကတည်းက တရုတ်ပြည်မှာ၊ BC ၁၅၀၀ လောက်ကတည်းက အီဂျစ်ပြည်မှာ သဘာဝဆိုးဆေးတွေကို အစားအစာတွေမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ လူတွေဖန်တီးထားတဲ့ ဆိုးဆေးတွေကိုတော့ ၁၉ ရာစုအစောပိုင်းလောက်ကမှ စပြီးတီထွင်အသုံးပြုခဲ့ကြတာပါ။ ** စားသောက်ကုန်တွေမှာ ဆိုးဆေးတွေကို တရားဝင်ထည့်သုံးခွင့် ရှိတာလား ** အစားအသောက်ဆိုးဆေး (Food dyes) လို့ ပြောရင်…
By Snacks Mandalay | March 9, 2018 | 0
ဒေါက်တာပြည့်ဖြိုးအေး Managing Director Snacks Mandalay Co., Ltd ~~~~~~~~~~~~~~~~ ပညာရေးနဲ့ မိဘလုပ်ငန်းအကြောင်းအကျဉ်း ———— ကျွန်တော်က ဆရာဝန်ဘွဲ့ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ရခဲ့တယ်။ ကျောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးက ဆေးပညာကို ဆက်လိုက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်က မိသားစုလုပ်ငန်းကိုလွှဲပြောင်းပြီး တာဝန်ယူရဖို့ အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ မိသားစုလုပ်ငန်းက ကောက်ပဲသီးနှံတွေဖြစ်တဲ့ ပဲတွေ၊ နှမ်းတွေကို တရုတ်ပြည်နဲ့ ရန်ကုန်ကို Export လုပ်ပေးရတဲ့ လုပ်ငန်းပါ။ ငရုတ်သီးကို ပြည်ပတင်ပို့တဲ့ လုပ်ငန်းစတင်ဖြစ်ပုံ ————- ကျွန်တော်တို့နဲ့ အဖေတို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုက တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်တွေ Value-added Products တွေကို ကျွန်တော်တို့က ထုတ်ချင်တာ။ အခက်အခဲရှိတာက နည်းပညာဘယ်ကရမလဲမသိဘူး။ မသိတဲ့အခါ ကျွန်တော်က ဆရာဝန်ဆက်မလုပ်ဘဲနဲ့ ဒီနည်းပညာဘယ်ကရမလဲဆိုတာ ကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်။ လိုက်ရှာတော့…
စားသောက်ကုန်တွေမှာတက်တဲ့မှိုနဲ့ Aflatoxin (အေဖလာတောက်ဆင်) အဆိပ်
By Three Stars | January 31, 2018 | 0
*** စားသောက်ကုန်တွေမှာတက်တဲ့မှိုနဲ့ Aflatoxin (အေဖလာတောက်ဆင်) အဆိပ် *** ** Aflatoxin အဆိပ်ဆိုတာ ဘာလဲ ** Aflatoxin (အေဖလာတောက်ဆင်) အဆိပ်ဆိုတာ သီးနှံတွေ စားသောက်ကုန်တွေမှာ တက်တတ်တဲ့ Aspergillus မှိုကနေ ထုတ်တဲ့ အဆိပ်ဓာတ်တစ်မျိုးပါ။ အဲဒီမှိုတက်ထားတဲ့စားသောက်ကုန်တွေ သီးနှံတွေမှာ Aflatoxin အဆိပ် ပါဝင်နေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအဆိပ်ဓာတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေကို စားမိတဲ့ လူတွေ တိရစ္ဆာန်တွေမှာ ဆိုးရွားတဲ့ ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေကို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ အေဖလာတောက်ဆင်အဆိပ်ဟာ အစားအစာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရေးတကြီး ပြောဆိုလာကြတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ (မှိုတက်တဲ့ အစားအစာတိုင်းမှာတော့ Aflatoxin ပါနေနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ Aflatoxin အဆိပ်ကို A. flavus, A. parasiticus, A. nomius မှိုမျိုးစိတ် (၃)…
Three Stars Products
တစ်မိသားစုလုံးရဲ့အရေး အမြဲတွေးပူနေရတဲ့ အိမ်ရှင်မတို့ရေ… ကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်ချရဖို့ ဘယ်ငရုတ်သီးမှုန့်၊ ဘယ်နနွင်းမှုန့်အမှတ်တံဆိပ်ကို သုံးရမလဲစဉ်းစားရင်း ဦးနှောက်ခြောက်နေရပြီလား… ဒါဆိုရင်တော့ ခေါင်းစားခံမနေနဲ့တော့ဗျို့… ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ချရတဲ့ Three Stars ငရုတ်သီးမှုန့်နဲ့ နနွင်းမှုန့်တွေကိုသာ ပြေးဝယ်လိုက်ပေတော့… Three Stars ငရုတ်သီးမှုန့်နဲ့ နနွင်းမှုန့်က ဆိုးဆေး မပါဘူး၊ မှိုလည်း မပါဘူး… နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီနည်းပညာတွေကို အသုံးပြုပြီး ထုတ်လုပ်ထားတာမို့ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီး အရောင်အဆင်းအနံ့အရသာကလည်း အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်… ဈေးနှုန်းကလည်း တကယ်ကို သင့်တင့်တဲ့အပြင်… နိုင်ငံတကာစားသောက်ကုန်ထုတ် စံချိန်စံညွှန်းတွေ ဖြစ်တဲ့ ISO 22000, GMP, HACCP တွေနဲ့အညီ ထုတ်လုပ်ထားတာမို့ အရည်အသွေးကိုလည်း ရာနှုန်းပြည့်အာမခံနိုင်တယ်လေ… organic စားသောက်ကုန်တွေမှ အသုံးပြုချင်တဲ့ အိမ်ရှင်မတွေအတွက် Netherlands နိုင်ငံက အသိအမှတ်ပြုပေးအပ်ထားတဲ့ EU & USDA…
By itadmin@snacksmandalay.com | May 10, 2016 | 1
Welcome to Snacks Mandalay. This is out first post (testing). Welcome to Snacks Mandalay. This is out first post (testing). Welcome to Snacks Mandalay. This is out first post (testing). Welcome to Snacks Mandalay. This is out first post (testing). Welcome to Snacks Mandalay. This is out first post (testing). Welcome to Snacks Mandalay. This…
အရောငျပါဝငျသောမှိုတကျငရုတျသီး (သို့မဟုတျ) ကငျဆာ
ဂငျြးကိုအသုံးပွုပွီး ဝိတျခလြို့ရမယျ့ နညျးလမျး (၄) သှယျ
အိမျရှငျမတိုငျးသိထားသငျ့တဲ့ ဂငျြးအကွောငျး အခကျြ (၇) ခကျြ
© Copyright 2017 Snacks Mandalay. All rights reserved.